Iintshayi zinomngcipheko ophezulu wokosulelwa yi-COVID-19
Malunga noMthi weLuburum
Thenga Thenga ipakethi yeepilisi zeTabex kwi-intanethi- iipilisi ezili-100 € 34,95
Njengomntu otshaya, ngaba umngcipheko wam wokufumana intsholongwane i-COVID-19 iphezulu kunaleyo ingatshayiyo?
Ngexesha lokulungiselela le Q & A, akukho zifundo ziphononongwe ngoontanga ezivavanye umngcipheko wosulelo lweSARS-CoV-2 olunxulumene nokutshaya. Nangona kunjalo, abantu abatshayayo (iisigarethi, imibhobho yamanzi, ibhidi, iisigare, iimveliso zecuba ezishushu) banokuba sengozini yokufumana i-COVID-19, njengoko isenzo sokutshaya sibandakanya ukunxibelelana kweminwe (kunye neecigarettes ezingcolileyo) ngemilebe, eyonyusa ukubakho Ukuhanjiswa kweentsholongwane ukusuka emlonyeni ukuya emlonyeni. Imibhobho yamanzi yokutshaya, ekwabizwa ngokuba yi-shisha okanye i-hookah, ihlala ibandakanya ukwabelana ngeengceba zomlomo kunye neethumbu, ezinokuthi ziququzelele ukuhanjiswa kwentsholongwane ye-COVID-19 kulungelelwaniso lwentlalo kunye noluntu.
Njengomntu otshayayo, ngaba kunokwenzeka ukuba ndifumane ezona mpawu zibuhlungu ngakumbi ukuba wosulelekile?
Ukutshaya naluphi na uhlobo lwecuba kunciphisa amandla emiphunga kwaye kwandisa umngcipheko wosulelo oluninzi lokuphefumla kwaye kunokwandisa ubungqongqo bezifo zokuphefumla. I-COVID-19 sisifo esosulelayo esihlasela kakhulu imiphunga. Ukutshaya kuphazamisa ukusebenza kwemiphunga kwenza kube nzima emzimbeni ukuba ulwe ne-coronaviruses kunye nezinye izifo zokuphefumla. Uphando olukhoyo lubonisa ukuba abantu abatshayayo basemngciphekweni omkhulu wokufumana iziphumo ezibi ze-COVID-19 kunye nokufa.
Njenge-vaper, ngaba kunokwenzeka ukuba ndosulelwe okanye ndibeneempawu ezinzima xa ndosulelekile?
Akukho bungqina malunga nobudlelwane phakathi kokusetyenziswa kwe-e-cigarette kunye ne-COVID-19. Nangona kunjalo, ubungqina obukhoyo bubonisa ukuba iinkqubo zokuhanjiswa kwe-nicotine ye-elektroniki (i-ENDS) kunye neenkqubo zokuhanjiswa kwe-non-nicotine ye-elektroniki (i-ENNDS), edla ngokubizwa ngokuba yi-e-cigarettes, ziyingozi kwaye zonyusa umngcipheko wesifo sentliziyo kunye nokuphazamiseka kwemiphunga. Ngenxa yokuba intsholongwane ye-COVID-19 ichaphazela indlela yokuphefumla, isenzo sokusebenzisa umlomo nge-e-cigarette sinokunyusa umngcipheko wosulelo.
Kuthekani ngokusebenzisa icuba elingenamsi, njengokutshaya icuba?
Ukusebenzisa icuba elingenamsi kudla ngokubandakanya isandla emlonyeni. Omnye umngcipheko onxulunyaniswa nokusebenzisa iimveliso zecuba elingenamsi, njengokutshaya icuba, kukuba intsholongwane inokusasazeka xa umsebenzisi ekhupha amathe agqithisileyo aveliswe ngexesha lokuhlafuna.
Yintoni ecebisa i-WHO kubasebenzisi becuba?
Ngenxa yobungozi bempilo obubangelwa kukusetyenziswa kwecuba, iWHO icebisa ukuyeka icuba. Ukuyeka kuya kunceda imiphunga nentliziyo yakho ukuba zisebenze ngcono ukusukela mhla uyeke. Kwimizuzu engama-20 yokuyeka, izinga eliphezulu lentliziyo kunye nokwehla kwegazi. Emva kweeyure ezili-12, inqanaba lekhabhon monokside egazini liyehla liqheleke. Kwiiveki ezi-2 ukuya kwezi-12, ukujikeleza kuyaphucuka kunye nomsebenzi wemiphunga uyanda. Emva kweenyanga ezi-1 ukuya kwezi-9, ukukhohlela kunye nokuphefumla kancinci kuyancipha. Ukuyeka ukutshaya kuya kunceda ekukhuseleni abantu obathandayo, ngakumbi abantwana, ekubeni bangatshayi xa betshaya.
I-WHO icebisa ukusetyenziswa kongenelelo oluqinisekisiweyo olunje ngemigca yokurhafisa yasimahla, iinkqubo zokuyeka ukuthumela imiyalezo, kunye nonyango lokutshintshwa kwenicotine (NRTs), phakathi kwabanye, lokuyeka icuba.
Ndingenza ntoni ukukhusela abantu kwiingozi ezinxulumene nokutshaya, ukusebenzisa icuba elingenamsi kunye nokuqhuma?
Ukuba uyatshaya, sebenzisa icuba okanye usebenzisa icuba elingenamsi, ngoku lixesha elifanelekileyo lokuba uyeke ngokupheleleyo.
Musa ukwabelana ngezixhobo ezifana nemibhobho yamanzi kunye ne-e-cigarettes.
Sasaza igama malunga neengozi zokutshaya, usebenzisa i-e-cigarettes kunye nokusebenzisa icuba elingenamsi.
Khusela abanye kwiingozi zokutshaya abantu abatshayayo.
Yazi ukubaluleka kokuhlamba izandla, ukuhamba emzimbeni, kwaye ungabelani ngokutshaya okanye iimveliso ze-e-cigarette.
Musa ukutshica kwiindawo zikawonke-wonke
Ngaba ukusetyenziswa kwenicotine kuwachaphazela amathuba am kwimeko ye-COVID-19?
Okwangoku akukho lwazi lwaneleyo lokuqinisekisa naluphi na unxibelelwano phakathi kwecuba okanye inicotine kuthintelo okanye unyango lwe-COVID-19. I-WHO ibongoza abaphandi, izazinzulu kunye namajelo eendaba ukuba alumke ngokwandisa amabango angenabungqina bokuba icuba okanye inicotine inokuwunciphisa umngcipheko we-COVID-19. I-WHO ivavanya rhoqo uphando olutsha, kubandakanya noluvavanya ikhonkco phakathi kokusetyenziswa kwecuba, ukusetyenziswa kwe-nicotine, kunye ne-COVID-19.
Ngekhe ubekhona kule ndawo ukuba ubungenawo umnqweno wokuphila ubomi obungenamsi.
Myalelo weTabex yakho namhlanje!
Akukho zimvo okwangoku. Yiba ngowokuqala ukuthumela ingxelo ngeli nqaku!
Ukunyuswa, iimveliso ezintsha kunye nentengiso. Ngokuzenzekelayo kwibhokisi lakho lebhokisi.
ukufuna Cards Cards Iinkcukacha zoqhagamshelwano umthetho wabucala Imiqathango yeNkonzo Policy Refund Policy Shipping Iinkcukacha zam Hlela Iinkcukacha zobuntu Cela idatha yoBuntu Ulwazi lwe nkampani
Copyright © 2021 Ingcali yeTabex